DHAGEYSO:-Dhurwaa Ariga Eebbaa leh,Xuseen-dhiqle iyo Sayid Maxamed | Voice Of Somalia
DHAGEYSO:-Dhurwaa Ariga Eebbaa leh,Xuseen-dhiqle iyo Sayid Maxamed
Posted on January 7, 2016 by Voice Of Somalia Image
Maalku wuxuu ka mid ahaa salabku ay Daraawiishtu adeegsato si ay gumaysiga uga kiciso geyiga Soomaaliyeed. Mar gaadiid ayuu u ahaa oo meesha diyaaradaha iyo dabaabaadka dagaalku Ingiriis iyo Talyaaniga ugu jireen ayey fardaha iyo awrtu Daraawiishta ugu jireen.
Geeraarkaa Xuseen-dhiqle ayaa xaruntii ku faafay. Aad baa loo jeclaystay oo waliba loogu majaajilaystay. Sayidku wuxuu ahaa nin fursadda gabayga iyo maansada oo dhan sida looga faa’iidaysto aad u yaqaana. Wuxuu is yidhi majaajiladaa iyo sheekadaa saaqday xarunta iyo dareenka dariiqada ee uu geeraarka Xuseen-dhiqle kasbaday ka faa’iidayso, wuxuuna tiriyey mid kaa kore jawaab u ah.
 Waa ceel todobadda Doollood ka mid ah oo u dhexeeya Wardheer iyo Waafdhuug.
XIGASHADA QORAALKA WAXAA LEH DOOLLO.COM